Nagu saabsan - Shandong Kunda Steel Co., Ltd.
Xaashida Birta ah
Shirkadeena waa shirkad hoosaad ka ah Laiwu Steel waxaana la aasaasay 2010 iyadoo la ansixiyay Xafiiska Warshadaha iyo Ganacsiga. Iyada oo raasumaal diiwaangashan RMB 1 bilyan, waa shirkad dhisme hoggaamineed oo leh astaamaha qaab-dhismeedka birta ee Shiinaha.
Waxaan ku takhasusay soo saarista taarikada birta ah ee u adkeysata xirmooyinka, taarikada birta u adkaysata cimilada, taarikada birta ah ee daawaha ah, taarikada birta ah ee xoogga sare leh, taarikada isku dhafan ee u adkeysata, taarikada taangiyada, taarikada weelka cadaadiska sare leh, iyo taarikada birta ah.
Waxaan nahay hay'adda ee warshadaha steel caanka ah ee China.We 100% loo hubiyo in tayada alaabta our.
Marka labaad: Waxaan leenahay xarun noo gaar ah oo wax lagu farsameeyo, oo bixin karta adeegga loo habeeyay. Sida foorarka, alxanka, nadiifinta, daaweynta daxalka, Galvanized.
Mar saddexaad, Waxaan haynaa in ka badan 2000ton oo kayd ah, Taas macnaheedu waa waqtiga dhalmada oo keliya 3-5 maalmood.
Ugu dambeyntii, Shirkaddayadu waxay aasaastay 2010, sidaa darteed waxaan leenahay khibrad toban sano ah oo ku saabsan warshadaha birta. Shaki kuma jiro inaan kuu fidin karno adeegga xirfadda leh.
Shandong Kunda Steel Co., Ltd. Waxay ku taalaa magaalada Liaocheng, gobolka Shandong, oo ah magaalo qurux badan waxaa loo caleemo saaray 'Oriental Venice'. Liaocheng oo ku taal galbeedka gobolka Shandong, 200Km South magaalada Beijing, 100Km galbeed magaalada Jinan. Jiqing Expressway waxay ka gudubtaa magaalada Bariga ilaa Galbeedka; Wadada Tareenka ee Beijing-Kowloon waxay socotaa in kastoo Waqooyiga ilaa Koonfurta, ay ka faa'iideysato xaalada taraafikada ee haboon, dhaqaalaha Liaocheng ayaa horumaraya si deg deg ah oo loo sameeyay xarunta ugu sarreysa saadka ee Waqooyiga Shiinaha.
Shandong Kunda Steel Co., Ltd. oo la aasaasay 2006, soo saar biibiile aan xuduud lahayn iyo beebka qaboojiyaha qabow.
In 2010 diiwaan gashan oo la aasaasay shirkadda Laiwu Steel Liaocheng Sales Branch, ku hawlan iibka Wear caabida Go'aan Steel.
Shirkadda Kunda Steel ayaa ansixisay aasaaskeeda Xafiiska Warshadaha iyo Ganacsiga sanadkii 2014, oo ku hawlan samaynta ganacsi saamiyadeed, oo ay ku jiraan waxsoosaarka birta iyo birta, birta saxanka, biibiile iyo baarka wareega.
In 2016 la aasaasay kooxda ganacsiga caalamiga ah. 6 adeegga qofka ee loogu talagalay macaamiisha ajnabiga ah.
Sannadkii 2016-kii, ayaa la aasaasay warshad biibiile ah oo birta ka samaysan oo bir ah, oo soo saarta wareeg, leydi iyo tubbo laba jibbaaran
Sanadkii 2017, waxaa la aasaasay warshadda leedhka, soosaarka ugu muhiimsan ee warqadda leedhka, albaabka leedhka, muraayadda leedhka, macdanta `` lead '' iyo wixii la mid ah
Sannadkii 2018-kii, waxaa la aasaasay warshad lagu buufiyo, iibso mashiinka cusub ee qarxa iyo rinjiyeynta ee tubbada, saxanka iyo wixii la mid ah.
Sannadkii 2019, aqoon isweydaarsiga CNC ayaa la aasaasay, iibso mashiin cusub oo goynta fiber, mashiinka foorarsiga, mashiinka daloolinta, mashiinka la arkay.
Sanadka 2020, kooxda ganacsiga caalamiga waxay noqdeen labo 3 koox.
Hadda Shandong Kunda Steel Co., Ltd. waxay bixin kartaa HAL ADEEG JOOJIN, laga bilaabo qalabka wax lagu karsado oo soo saaraya ilaa dhammeystirka sheyga, oo ay ku jiraan Xidho saxan bir ah oo iska caabin ah / Weathering Steel plate / Xoog Carbon Steel Plate / Stainless Steel / Aluminium / Brass / saxan / bar wareega / baarka xagal / bar flat / profile Kuwaas oo dhami waxay leeyihiin kaydka cabirka caadiga ah, 2000 tan oo taarikooyin ah, 1000 kun oo biibiile iyo wixii la mid ah.
Iyadoo Fikradda ah "Sii Wanaajinta ， Win-win Iskaashiga＂ ， oo ay fuliso tayo la isku halleyn karo iyo kadib adeegga adeegga iibka, Kunda wuxuu sumcad wanaagsan ka helay macaamiisha gudaha iyo dibaddaba. Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweynaynaa inaad u timaaddid shirkadeena gorgortanka ganacsiga oo aad guul weyn ka wada gaartaan !
2020, qiimaha suuqa birta Shiinaha ayaa fa ...
Qeybta Dhaqaalaha ee Guud ...
Ganacsatada birta ah iyo kuwa gudaha ka shaqeeya ayaa ...
Cinwaanka: 2F, Dhismaha Caalamiga ah ee Casriga ah, Degmada Dongchangfu, Liaocheng, Shandong, Shiinaha